Imandarmedia.com.np: सपनामा सेक्स गरेको शुभ हो कि अशुभ ? को संग सेक्स गरेको अर्थ के हुन्छ ?
Lifestyle » सपनामा सेक्स गरेको शुभ हो कि अशुभ ? को संग सेक्स गरेको अर्थ के हुन्छ ?
सपनामा सेक्स गरेको शुभ हो कि अशुभ ? को संग सेक्स गरेको अर्थ के हुन्छ ?
सपना सबैले देख्छन् । यो धुव्रसत्य कुरा हो । हाम्रा बुढापाकाले सपनाबारे भन्ने गर्छन्, ‘तिमीले देखेको यो सपना शुभ हो वा यो अशुभ ।’ केही सपना यस्तो देखिन्छ, जो सेक्ससँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यो आफ्नै पति वा पत्नीसँग सेक्स गरिरहेको सपना हुँदैन ।
कुनै परपुरुष वा परस्त्रीसँग सेक्स गरिरहेको सपना देखिन्छ । यस्तो सपनाको अर्थ के हुन्छ ? के सेक्सको सपनासँग तपाईको कुनै सम्बन्ध छ ?
आफ्नो पार्टनरसँग: यदि तपाईं सपनामा पति/पत्नी वा लभरका साथ सेक्स गरेको देख्नुहुन्छ भने यसका दुई फरक अर्थ हुनसक्छ ।
दोस्रो अर्थ हुनसक्छ, तपाईं आफ्नो पार्टनरबाट त्यो सबै पाइरहनु भएको छैन, जुन तपाईं चाहनुहुन्छ । सेक्सोलोजिष्टहरुका अनुसार यदि यस्तो सपना देखिन्छ भने एक पटक आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गरेर कारण जान्ने कोशिस गर्नुपर्दछ ।
पूर्व ब्वाइफ्रेण्ड वा गर्लफ्रेण्डसँग: यदि तपाई आफ्नी पूर्व गर्लफ्रेण्ड वा ब्वाइफ्रेण्डका साथ सेक्स गरेको सपना देख्नुभयो भने यसको मतलब हुन्छ, पूरानो प्रेमी/प्रेमिकासँग तपाईंको सेक्स लाइफ एकदमै आनन्ददायक थियो होला । वा फेरि पनि हुन सक्छ होला । हुन सक्छ, तपाईंले आफ्नो नयाँ पार्टनरसँग पूरानो पार्टनरको तुलना गरिरहनुभएको छ ।
यदि तपाईसँग अहिले कुनै पार्टनर नै छैन भने त्यसको फरक अर्थ छ, तपाईंको अवचेतन मनले कि त सेक्स मिस गरिररहेको छ कि पुरानो पार्टनर ।
मन परेको स्टारसँग: यदि तपाईंले कुनै मनपर्ने सेलिवि्रटी वा स्टारसँग सेक्स गरेको सपना देख्नुभयो भने त्यसको मतलब हो- या तपाईं आफ्नो पार्टनरमा सेलिवि्रटीजस्तै कुनै चिज खोजिरहनु भएको छ । वा, तपाईं उक्त स्टारको लुक र सफलता आफ्नो पार्टनरको खुबीमा मिलाउन थाल्नुहुन्छ ।
समलिङ्गीसँग : यदि तपाईंले समलिङ्गीको साथ अन्तरंग सम्बन्ध बनाउदै गरेको सपना देख्नुभयो त्यसको अर्थ हुन्छ, तपाई सेक्समा प्रष्ट (स्टे्रट) हुनुहुन्न ।
यदि तपाई पुरुष हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो सेक्स पार्टनर पुरुष बनाउँदा आनन्दायी हुन्छ भन्ने सोच छ भने त्यो तपाईको भ्रम मात्र हो ।
यदि यस्तो खालको सपना तपाई बारम्बार देख्नुहुन्छ वा तपाईलाई साच्चिकै आफू समलिङ्गीप्रति आक्रषित महुसस गर्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ हो-तपाईले सेक्सको प्राथमिकताका बारेमा फेरि तपाईले पुर्नविचार गर्नुपर्छ।
यस्तो खाले सपनाको अर्को हिसाबले यो पनि अर्थ हुनसक्छ-तपाईको पार्टनरले तपाईप्रति अरु केयरिङ वा विनम्र व्यवहार खोजिरहेको छ ।
आफ्नो पार्टनरलाई धोका: यदि तपाईं सपनामा आफ्नो पार्टनरलाई धोका दिइरहनु भएको छ भने यसको मतलब हुन्छ तपाईंको सम्बन्धमा दरार आउदैंछ । यो सपना तपाईंका लागि निकै डिस्र्टबिङ हुन सक्छ । यो सपना त्यतिबेला आउँछ, जतिबेला तपाईको रिलेशनमा कोही ठूलो परिवर्तन हुँदैंछ ।
यस सपनाको मतलब हुन तपाईं आफ्नो जीवनमा हुने ठूलो परिवर्तनबारे अनभिज्ञ हुनुहुन्छ । र, सोच्दैं हुनुहुन्छ तपाईं भविष्यमा हुने घटनाको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो सपनाको दोस्रो अर्थ हुन्छ, तपाईं तपाईको पार्टनरसँग पर्याप्त समय पाइरहनु भएको छैन । र, तपाईंको पार्टनरका साथ इमोशन बिल्डिङ जरुरी छ ।